ကြိုတင် ကြည့်ရှုပြီး စာအုပ်ဖိုင်များကို ရယူခြင်း
အများအပြား ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက် ပုံနှိပ်ခြင်း
ကနာဒါ | ಕನ್ನಡ
ကိုးရီးယား | 한국어
ချက် | Čeština
ခရိုအေးရှား | Hrvatski
ဂရိ | Ελληνικά
ဂျာမန် | Deutsch
ဂျော်ဂျာ | ქართული
စပိန် | Español
ဆငျဟာလ | සිංහල
ဆွီဒင် | Svenska
ဆလိုဗက် | Slovenčina
တမီးလ် | தமிழ்
တယ်လူဂူ | తెలుగు
တူရဂီ | Türkçe
တာကာလော့ဂ် | Filipino
ထိုင်း | ภาษาไทย
ဒတ်ချ် | Nederlands
နီပေါလ် | नेपाली
နော်ဝေး | Norsk
ပိုလန် | Polski
ပေါ်တူဂီ | Português
ပြင်သစ် | Français
ဖရစ်ရှန် | فارسی
ဗီယက်နမ် | Tiếng
ဘူလ်ဂေးရီးယား | български
မီဇိုး | Mizo ṭawng
မလေယာလမ် | മലയാളം
မာရသီ | मराठी
မြန်မာစာ | မြန်မာဘာသာ
ရိုမေးနီးယား | Română
ရုရှား | Русскuŭ
လတ်ဗီယာ | Latviešu
ဟင်ဒီ | हिन्दी
ဟန်ဂေရီ | Magyar
ဟီဘရူး | עברית
အက်စ်တိုနီးယား | eesti
အင်္ဂလိပ် | English
အီတလီ | Italiano
အယ်လ်ဘေးနီးယား | Shqip
အာရဘစ် | عربي
ဤအတွဲရှိ စာအုပ်များသည် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပြီး၊ အခြေခံမှစ၍ အလယ်အလတ်နှင့် အဆင့်မြင့် အကြောင်းအရာများဟူ၍ စီစဉ်ထားပါသည်။ စာအုပ်များကို ရယူရာတွင် အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အကူအညီ စာမျက်နှာ သို့ ကြည့်ရှုလေ့လာပါ။ သင်ရယူလိုသော စာအုပ်များကို ထုတ်ယူနိုင်ရန် အောက်ပါ ဖြန့်ဝေခြင်းမူကို ကျေးဇူးပြု၍ သဘောတူညီပေးပါ။
ဤ Site မှ ဖိုင်များကို ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒ
Living Stream Ministry သည် ဤစာအုပ်ခုနစ်အုပ်ကို အခမဲ့ရ ယူနိုင်ရန် အီလက်ထရောနစ်ဗားရှင်းအဖြစ် ဝမ်းမြောက်စွာပြုလုပ်ထားပါသည်။ များစွာသောသူတို့သည် ဤစာအုပ်များကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် အခြားသူများထံလည်း လွတ်လပ်စွာ ထပ်ဆင့်ညွှန်ပြပေးကြမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤဖိုင်များကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ထားသောစာအုပ်များသည် အကန့်အသတ်ရှိပါသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်သုံးရန် မှာယူလိုပါက၊ အသေအချာ မှာယူမှုပြုရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ဤဖိုင်များကို မည်သည့်နေရာ၌ဖြစ်စေ အခြားပုံစံဖြင့် ထားရှိခြင်းမပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ မိတ္တူကူးလိုပါက၊ မူပိုင် mmb.permissions@lsm.org. သို့ စာရေးဆက်သွယ်ကာ တောင်းဆိုမှုပြုပါ။ မူပိုင်နှင့်သက်ဆိုင်၍ တရားဥပဒေနှင့် အညီ လေးစားလိုက်နာရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ဤ PDF ဖိုင်များကို အခြားနည်းလမ်းဖြင့် အသုံးပြုရန် ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် စာပြန်စီခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ။
စာအုပ်နောက်ဖုံးမှ ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် ပုံဆောင်ချက်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ပြည့်ဝနေသော်လည်း၊ များစွာသော လူတို့က ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည့် သမ္မာကျမ်းစာတွင် တင်ဆက်ထားသည့် အတိုင်း ဤအသက်တာ၏ အခြေခံကျသော ဒြပ်သဘာဝများကို နားလည်ခြင်း မရှိကြပေ။ Watchman Nee and Witness Lee တို့၏ ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏ အခြေခံ ဖွင့်ပြခြင်းများ စာအုပ်တွင် ခရစ်ယာန်အသက်တာကို မိတ်ဆက်ဖော်ပြ ပေးထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်သည် ပထမအခန်း ဖြစ်သည့် လူ့အသက်တာ၏ နက်နဲခြင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ပိုင်းအခန်း များသည် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအတွက် အခြေခံကျသော အတွေ့အကြုံများကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ဆုံးအခန်းတွင် ယုံကြည်သူတစ်ဦး၏ ခရစ်ယာန် အသက်တာအဖို့ အဆုံးစွန်သော သော့ချက်ဖြစ်သည့် လူသားဝိညာဉ်၌ရှိသော ခရစ်တော်ကို တွေ့ကြုံခံစားခြင်းအား တင်ဆက်ထားသည်။ ဘုရားကို ရှာဖွေသောသူများနှင့် ခရစ်တော်၌ ကြီးထွားလိုသူ ယုံကြည်သူများအဖို့ ဤဝေငှချက်များသည် ကြွယ်ဝသော အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ခရစ်ယာန်အသက်တာအတွက် ခိုင်မာသည့် အုတ်မြစ်ကို တည်ဆောက် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရယူရန် PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.
စာအုပ်နောက်ဖုံးမှ ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏ အလယ်ဗဟိုကျသည့် အချက်မှာ ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ကို သိကျွမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို နေ့စဉ် အသက်ရှင်သော နည်းလမ်း၌ ဆက်သွယ်ကာ တွေ့ကြုံရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအတွေ့အကြုံ၌ အခြေခံ ဒြပ်သဘာဝ အချို့ ပါဝင်ပြီး၊ ၀ိညာဉ်ဆိုင်ရာအစာ၊ ပုံမှန် ၀ိညာဉ်ရေးရာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု၊ လေးနက်သော ၀ိညာဉ်ရေးရာ ကြီးထွားမှုတို့ ပါဝင်သည်။ Watchman Nee and Witness Lee တို့၏ ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏ အခြေခံ ဒြပ်သဘာဝများ (အတွဲ ၂) ၌ ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏ ကြီးထွားခြင်းအတွက် အခြေခံကျသော ဒြပ်သဘာဝသုံးခုကို တင်ဆက်ထားသည်၊ ယင်းတို့မှာ သခင်ဘုရားနှင့် အချိန်ယူခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း၌ ကိုယ်တော်ကို ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တော်၌ လေးနက်စွာ ကြီးထွားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤ ဝေငှချက်များသည် ရှာဖွေသော ခရစ်ယာန်များအား ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်၏ ကြွယ်ဝသော ကျွေးမွေးမှု၊ ခရစ်တော်နှင့်အတူ တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန် ဆက်သွယ်မှု၊ ဘုရား၏ လျှို့ဝှက် နက်နဲသော အတွေ့အကြုံအထဲသို့ ခေါ်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
စာအုပ်နောက်ဖုံးမှ ဓမ္မဟောင်းတစ်လျှောက် တွေ့ရသည့် ပုံဆောင်ချက်များနှင့် သရုပ်ဖော်ပြချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင် ယေရှုခရစ်၏ အံ့သြဖွယ် မြင်ကွင်း တင်ဆက်ထားသည်။ မထင်ရှားသော်လည်း အရေးအကြီးဆုံးသော ပုံဆောင်ချက်များမှ တစ်ခုမှာ ကောင်းသောမြေ ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံး ပါဝင်သော ခရစ်တော် တွင် ဝစ်နက်စ်လီသည် တရားဟောရာကျမ်းရှိ ဝေစုများကို ဖွင့်ချပေးခဲ့ပြီး၊ အစ္စရေးလူမျိုးများ အမွေခံရသည့်မြေသည် ခရစ်တော်ကို အပြည့်အဝပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဓမ္မသစ် အမွေလည်း ဖြစ်ကြောင်းကို ဖွင့်ပြထားသည်။ သူက စစ်၍ မကုန်နိုင်သော ကြွယ်ဝခြင်းများ မှ အချို့၏ အသေးစိတ်အချက်ကို တင်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ပုံဆောင်ချက် တစ်ခုစီကို ယုံကြည်များ ဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံအဖြစ် ရှင်းပြပေးထားသည်။ အစမှ အဆုံးတိုင်အောင် အရာအားလုံး ပါဝင်သော ခရစ်တော် သည် ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေသော သူများအား ဘုရားသခင်၏ ထာဝရ အကြံအစည်တော် ပြည့်စုံခြင်း အတွက် ကောင်းသောမြေဖြစ်သည့် ခရစ်တော်ကို တွေ့ကြုံခံစားကာ မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ရန် တိုက်တွန်းထားပါသည်။
စာအုပ်နောက်ဖုံးမှ ၁၉၂၇ တွင် Watchman Nee က ခရစ်ယာန်တစ်ဦး၏ ကြီးထွားမှုနှင့် တိုးတက််မှုအတွက် ဂန္တဝင်မြောက်လက်ရာဖြစ်သည့် ၀ိညာဉ်ဆိုင်ရာ လူ စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်တွင် Nee က ယုံကြည်သူများ၏ ၀ိညာဉ်ရေးရာ ကြီးထွားမှုအတွက် အဓိကနှင့် မရှိမဖြစ်သော ဖွင့်ပြခြင်း ဟူသော လူသည် အစိတ်အပိုင်း သုံးခုဖြစ်သည့် ၀ိညာဉ်၊ စိတ်နှင့် ခန္ဓာတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း ရိုးရှင်းသည့် ကျမ်းစာဆိုင်ရာ သမ္မာတရားကို တင်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏စီမံကိန်း စာအုပ်တွင် ညီအစ်ကိုနီး၏ အနီးကပ်ဆုံးနှင့် အားအထားရဆုံး လုပ်ဖော်ဆောင်ဘက် Witness Lee က ဤအခြေခံအပေါ် တည်ဆောက်ထားပြီး၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိကိုယ်တော်တိုင်ကို လူအထဲသို့ ထည့်သွင်းဝေငှကာ အသင်းတော်၌ ကိုယ်တော်၏ပြည့်ဝထင်ရှားခြင်း ဖြစ်လာစေ ရန် အလိုရှိကြောင်း ကျမ်းစာ၏ အလယ်ဗဟိုကျသော ဖွင့်ပြခြင်းကို ပြသပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏စီမံကိန်း စာအုပ်တွင် Witness Lee က ဘုရားဆိုင်ရာ သုံးပါးတစ်ပါး၏ လှုပ်ရှားမှုကို ရှင်းလင်းစွာ ဖွင့်ပြထားပြီး၊ ကိုယ်တော်၏ ထာဝရအကြံအစည်တော် ပြည့်စုံစေရန်နှင့် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် လက်တွေ့ကျသည့် နည်းလမ်းများကို ယုံကြည်သူများအား ဖွင့်ပြပေးသည်။
စာအုပ်နောက်ဖုံးမှ ခရစ်ယာန်အသက်တာအဖို့ အခြေခံဖြစ်သော ခရစ်တော်ကို တွေ့ကြုံခံစားခြင်း များစွာ ရှိနေပါ သေးသည်။ ယုံကြည်သူများဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်၏ ပို၍မြင့်သော အလေ့အလာအတိုင်း အသက်ရှင်ရပေမည်၊ အမှန်နှင့် အမှား၏အလေ့အလာနှင့်မျှသာ အသက်မရှင်သင့်ပါ။ ဘုရား၏အသက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ ပြုပြင်လုပ်ဆောင်သောအခါ ဤအသက်၏ထွန်းလင်းခြင်းသည် မှန်ကန်သော အသက်တာသို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ဆောင်ပေးကာ အခြားယုံကြည်သူများနှင့်အတူ ဘုရား၏စုပေါင်း ထင်ရှားခြင်းဖြစ်သည့် အသင်းတော်အဖြစ် တည်ဆောက်ပေးသည်။ Watchman Nee and Witness Lee တို့၏ ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏ အခြေခံ ဒြပ်သဘာဝများ (အတွဲ ၃) ၌ ဤအတွေ့အကြုံများကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။ ဤဝေငှချက်များသည် ၀ိညာဉ်ဆိုင်ရာအစာကို ယုံကြည်သူများအားလုံးအထဲသို့ သခင်ဘုရား၌ သူတို့၏ ကြီးထွားမှု အတွက်လည်းကောင်း၊ အသင်းတော်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ကြီးထွားခြင်းအတွက် လည်းကောင်း ဝေငှဖြန့်ဖြူးပေးမည်ဖြစ်သည်။
စာအုပ်နောက်ဖုံးမှ ဘုရားသခင်၏ အလိုဆန္ဒနှင့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကိုယ်တော်၏ ပုံသဏ္ဌာန်တော်ရှိပြီး၊ ကိုယ်တော်၏ ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေမည့်၊ ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်၏ထာဝရနားခိုခြင်း ရှိရန်၊ ကိုယ်တော်၏ရန်သူကို ဆက်ဆံဖြေရှင်းမည့် ကိုယ်တော်၏အခွင့်အာဏာကို ပိုင်ဆိုင်မည့် စုပေါင်းထားသော လူရရှိရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အနည်းငယ်သောသူတို့သာလျှင် ဘုရားသခင်၏ ဤကြီးမားသောအလိုဆန္ဒနှင့် ရည်ရွယ်ချက်သည် ကိုယ်တော်တိုင်၏ အသက်တော်အားဖြင့်သာရရှိနိုင်ကြောင်းကိုသိကြသည်။ ပို၍ အနည်းငယ်သောသူတို့သာ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ခရစ်တော်၏အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ရရှိစေသည့် ဘုရားဆိုင်ရာအသက်ကို တွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့် သိကျွမ်းခြင်းအကြောင်းအား ထိတွေ့ကြသည်။ သူတို့သည် များစွာသော ရှာဖွေ ဆာငတ်သူများ ဖြစ်ကြသော်လည်း အနည်းငယ်သောသူတို့သာလျှင် အသက်၏ နည်းလမ်းကို ရှာတွေ့ကြသည်။ များစွာသောလူတို့သည် အသက်အတွက် လုံ့လဝီရိယ၊ အသိပညာ၊ တန်ခိုး၊ ဆုကျေးဇူးစသည်တို့ကို လွဲမှားစွာပင် အသုံးပြုကြသည်။ အသက်ကို သိကျွမ်းခြင်းစာအုပ်တွင် ဝစ်နက်စ်လီက ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားအသက်ကို အစပြုရရှိခြင်းဖြစ်သည့် အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းဖြင့် အစပြုကာ အသက်၏ အတွင်းပိုင်း အာရုံခံစားမှု အတိုင်း သိကျွမ်းခြင်းနှင့် အသက်ရှင်ခြင်းတိုးတက်မှုဖြစ်သည့် အသက်သို့ ဦးဆောင်သည့် လမ်းကြောင်းကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ အသက်ကို သိကျွမ်းခြင်း စာအုပ်သည် ခရစ်တော်ကို စစ်မှန်စွာ တွေ့ကြုံခံစားခြင်း၏ အကောင်းမြတ်ဆုံးသော အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ချပေးကာ ဝစ်နက်စ်လီ၏ အသက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်း စာအုပ်အား မိတ်ဆက်ဖော်ပြထားပါသည်။
စာအုပ်နောက်ဖုံးမှ ဘုရားသခင်သည် အသင်းတော်တည်းဟူသော ရွေးနုတ်ခံ ယုံကြည်သူများကို ကောင်းကင်ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်မှ ကြည့်တော်မူသည်။ သူမကို အပြစ်နှင့် အပြစ်များ၏တန်ခိုးက အနိုင်ယူနေသည်ဟု မမြင်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်သည် အသင်းတော်ကို ခရစ်တော်၏ ဘုန်းထင်ရှားသော အဖော်အဖက်အဖြစ် မြင်တော်မူသည်။ ဘုန်းတော်နှင့် ပြည့်စုံသော အသင်းတော် စာအုပ်တွင် Watchman Nee က ကျမ်းစာရှိ အသင်းတော်ကို ကိုယ်စားပြုသော အချက်လေးချက်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားသည်- ယင်းတို့မှာ ကမ္ဘာဦး၊၂ ရှိ ဧဝ၊ ဧဖက်၊၅ ရှိ ဇနီး၊ ဗျာဒိတ်၊၁၂ ရှိ မိန်းမနှင့် ဗျာဒိတ် ၂၁ နှင့် ၂၂ ရှိ သတို့သမီးတို့ဖြစ်သည်။ ယင်းဥပမာတစ်ခုစီ၌ အသင်းတော်သည် ဘုရားသခင်၏ ထာဝရ အကြံအစည်တော်ကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် အမြင့်ဆုံး ခေါ်ခြင်းခံရကြောင်း တင်ဆက်ထားသည်။ လက်ရှိတွင် လက်ရေးမူ မှတ်စုများကို ရှာတွေ့ခဲ့ပြီး၊ ဘုန်းတော်နှင့် ပြည့်စုံသော အသင်းတော် စာစောင်တွင် အသစ်သော ပြန်ဆိုခြင်းကို ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ထားကာ၊ ၁၉၃၉ မှ ၁၉၄၂ နှစ်ကုန်အထိ Watchman Nee ၏ ဝေငှချက်များမှ အပြည့်စုံဆုံး မှတ်တမ်းကို ပြုစုနိုင်ခဲ့ပါသည်။